डाक्टर केसीको समर्थन गर्दै जुम्लाका महिला सडकमा
जुम्ला ः १७ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीको मागप्रति समर्थन जनाउँदै दृष्टि विहिनसहित जुम्लाका महिला सडकमा ओर्लेका छन् । केसीको स्वास्थ्य जटिल बन्दै गए पनि सरकारले बेवास्था गरेको भन्दै आन्दोलनमा होमिन परेको द्वन्द्वपीडित महिला संघ जुम्लाकी अध्यक्ष हरि महतले बताइन् ।
महतले भनिन्, ‘मान्छे मर्ने र बाँच्नेको दोसादमा पुग्दासमेत राज्यले ध्यान दिएको छैन, यो राज्यको निरङ्कुश शासन हो । यस्तो शासन लोकतन्त्रमा मान्य हुँदैन ।’ डा. केसीको मागप्रति एक्येबद्धता जनाउँदै जुम्लाका नागरिक समाज अगुवाहरुले जिल्ला प्रशासनमार्फत प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
नागरिक समाज जुम्लका अध्यक्ष राजबहादुर महतले सरकार डा. गोविन्द केसीको मागप्रति कठोर बन्न नहुने तर्क गरे । राज्य कठोर भएकाले केसीको स्वास्थ्य दिनप्रतिदिन बिग्रदै गएको छ, यसले उनको जीवन रक्षासहित माग सम्बोधनका लागि तत्काल वार्ता टोली गठन गरी प्रक्रिया अगाडी बढाउनु पर्ने उनले बताए ।
जीवन रक्षाको मागसहित डा. केसीको माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई नागरिक समाज जुम्लाका अध्यक्ष राजबहादुर महत, द्वन्द्वपीडित महिला संघकी अध्यक्ष हरि महत, एकल महिला जुम्लाकी अध्यक्ष तलितादेवि थापा, नेपाल मानवअधिकार संगठन जुम्लाका अध्यक्ष गोविन्द शर्मा लगायतको हस्ताक्षर गरी ज्ञापन पत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु पौडेललाई बुझाएका हुन् ।